आजदेखि विश्वकप क्रिकेट : १० देशले प्रतिष्पर्धा गर्दै - Yatra Daily
Home खेलकुद आजदेखि विश्वकप क्रिकेट : १० देशले प्रतिष्पर्धा गर्दै
आजदेखि विश्वकप क्रिकेट : १० देशले प्रतिष्पर्धा गर्दै
काठमाडौँ, जेठ १६ – आइसीसी विश्वकप क्रिकेट अब केहिदिनमा शुरु हुदै छ । इङल्याण्ड र वेल्समा संयुक्तरुपमा आयोजना हुने विश्वकपको यो १२औ संस्करण हो । आगामी मे ३० देखि जुलाई १४ सम्म हुने यस विश्वकपमा १० टिमले भाग लिदै छन् ।
नेपाली समय अनुसार अपराह्न सवा ३ बजे शुरु हुने उद्घाटन खेलमा आयोजक इङल्याण्ड र दक्षिण अफ्रीका खेल्दै छन् । घरेलु मैदानमा इङल्याण्डलाई यस विश्वकपको ‘फेभरेट’ टिम मानिएको छ भने दक्षिण अफ्रीकाको युवा र अनुभवीको मिश्रण रहेको टिम पनि बलियो टिम रहेको छ । दक्षिण अफ्रिका आफ्ना तिब्र गतिका बलर डेल स्टेन घाइते भएपछि उनी बिना विश्वकपको पहिलो खेल खेल्दै छ ।
यस विश्वकपमा सहभागी टिम :
इङल्याण्ड आयोजकको हैसियतमा विश्वकप खेल्दै छ भने अन्य सात देश अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भारत, न्यूजील्याण्ड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंका सन् २०१७ सेम्टेम्बर ३० सम्म आइसीसीको उत्कृष्ट ८ वरियतामा परेका कारण विश्वकपमा सिधै छनौट भएका हुन् ।
त्यस्तै अफगानिस्तान र वेस्टइन्डिज भने सन् २०१८ को मार्चमा जिम्बाबेमा भएको क्रिकेट विश्वकप क्वालिफायरमा पहिलो र दोस्रो भएर छनौट भएका हुन् ।
यस विश्वकपमा आइसीसीले यसअघि सन् १९९२ मा खेलाइएको फर्म्याटमा विश्वकप खेलाउने भएको छ । यस पटक सबै टिमलाई एकै समुहमा राखिएको छ भने सबै टिमले एकअर्काविरुद्ध एकएक पटक खेलेपछि शिर्ष चारमा रहने टिम सेमिफाइनलमा पुग्ने छन् ।
यसरी मे ३० देखि जुलाई ६ सम्म लिग खेल हुने छन् भने अंक तालिकामा शिर्ष स्थानमा रहेको र चौथो स्थानमा रहेको देशबीच जुलाई ९ मा पहिलो सेमिफाइनल खेल हुने छ भने जुलाई ११ मा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेको देशबीच दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुने छ ।
त्यस्तै प्रतियोगिताको फाइनल खेल जुलाई १४ मा हुने छ ।
क्रिकेट विश्वकपमा अहिलेसम्मका एघार संस्करणसम्म आउदा अस्ट्रेलियाले धेरै पटक विश्वकप जितेको छ । अस्ट्रेलियाले सन् १९८७, १९९९, २००३, २००७ र २०१५ गरी कुल ५ पटक विश्वकप जितेको छ ।
अस्ट्रेलियाले अहिलेसम्म कुल ५ पटक विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जित्दै सबै भन्दा धेरै पटक विश्वकप क्रिकेटको उपाधि जित्ने देश रहेको छ ।अस्ट्रेलियाले सन् १९८७, १९९९, २००३, २००७ र २०१५ गरी कुल ५ पटक विश्वकप जितेको छ ।
यस विश्वकपमा पनि अस्ट्रेलियालाई प्रमुख दाबेदार मध्ये एक मानिएको छ ।आगामी ३० मे देखि जुलाई १४ सम्म इङल्याण्ड र वेल्समा हुने क्रिकेट विश्वकपमा अस्ट्रेलिया एरोन फिन्चको कप्तानीमा खेल्दै छ ।
विश्वकप क्रिकेटमा अहिलेसम्म बनेका रेकर्ड्स
अहिलेसम्म सम्पन्न एघार संस्करणसम्म कैयौ यस्ता रेकर्ड बनेका छन् जसलाई तोड्न लामो समय पर्खिनु पर्ने देखिन्छ ।
धेरै फाइनल खेल्ने रेकर्ड :
धेरै खेल खेल्ने र जित्ने रेकर्ड :
अस्ट्रेलिया विश्वकपमा अहिलेसम्म धेरै खेल जित्ने टिम पनि हो । अस्ट्रेलियाले अहिलेसम्म विश्वकपमा खेलेका कुल ८४ खेलमा ६२ खेल जितेको छ भने २० खेलमा हार बेहोरेको छ । त्यस्तै एक खेलको कुनै परिणाम आएन भने एक खेल बराबरीमा सकिएको छ ।
विश्वकपमा धेरै रन :
विश्वकप क्रिकेटमा धेरै रन बनाउने खेलाडी भारतका सचिन तेन्दुलकर हुन् । सचिनले ६ विश्वकपका ४५ खेलमा २२७८ रन बनाएका छन् । यस सुचिमा दोस्रो स्थानमा अस्ट्रेलियाका रिक्की पोन्टिङ रहेका छन् । उनले विश्वकपमा ४६ खेलमा १७४३ रन बनाएका छन् । त्यस्तै श्रीलंकाका कुमारा सांगाकाराले ३७ खेलमा १५३२ रन बनाएका छन् ।
धेरै शतक :
विश्वकपमा धेरै शतक बनाउने रेकर्डपनि भारतका सचिन तेन्दुलकरको नाममा रहेको छ । सचिनले ४५ खेलमा कुल ६ शतक बनाएका छन् । जसमा उनको सर्वाधिक रन १५२ रहेको छ ।
त्यस्तै दोस्रो धेरै शतक बनाउने खेलाडी श्रीलंकाका कुमारा संगाकारा र अस्टेलियाका रिक्की पोन्टिङ हुन् । संगाकाराले ३७ खेलमा र पोन्टिङले ४६ खेलमा ५-५ शतक बनाएका छन् । त्यस्तै भारतका सौरभ गांगुली, दक्षिण अफ्रीकाका एबी डिभिलीयर्स, अस्ट्रेलियाका मार्क वाग, श्रीलंकाका तिलकरत्ने दिलसान र महिला जयवर्धनेले ४-४ विश्वकप शतक प्रहार गरेका छन् ।
धेरै अर्धशतक :
विश्वकप क्रिकेटमा धेरै अर्धशतक बनाउने खेलाडी पनि भारतका सचिन तेन्दुलकर नै हुन् । सचिनले विश्वकपमा सबै भन्दा धेरै २१ अर्धशतक बनाएका छन् । त्यस्तै सचिनपछि श्रीलंकाका कुमारा संगाकाराले १२ र अष्ट्रेलियाका रिक्की पोन्टिङले ११ विश्वकप अर्धशतक बनाएका छन् ।
धेरै विकेट :
विश्वकप क्रिकेटमा धेरै विकेट लिने खेलाडी अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याग्रा हुन् । म्याग्राले विश्वकपमा ३९ खेलमा ७१ विकेट लिएका छन् । त्यस्तै दोस्रो धेरै विश्वकप विकेट लिने खेलाडी श्रीलंकाका मुथैया मुरलिधरन हुन् । मुरलिधरनले विश्वकपमा ४० खेलमा ६८ विकेट लिएका छन् । त्यस्तै पाकिस्तानका पुर्व तिब्र गतिका बलर वाशिम अक्रमले विश्वकपमा ३८ खेल खेल्दै ५५ विकेट लिएका छन् । श्रीलंकाका चामिन्दा भासले ३१ खेलमा ४९ विकेट लिदै विश्वकपमा धेरै विकेट लिने खेलाडीको सुचिमा चौथो स्थानमा रहेका छन् । भारतका बलर जाहिर खान र ज्वागल श्रीनाथले विश्वकपमा ४४-४४ विकेट लिदै पाँचौ र छैठौ स्थानमा रहेका छन् ।
विश्वकपमा शतकको रेकर्ड :
त्यस्तै अहिलेसम्मका विश्वकपमा कुल १६५ शतक बनेका छन् । पहिलो विश्वकप सन् १९७५ मा कुल ६ शतक बनेका थिए भने दोस्रो विश्वकप सन् १९७९ मा केवल २ शतक बनेका थिए । त्यस्तै तेस्रो विश्वकप सन् १९८३ मा कुल ८ शतक बनेका थिए । त्यस्तै सन् १९८७ मा ११ शतक, सन् १९९२ मा ८ शतक र १९९६ मा १६ शतक बनेका थिए ।
त्यस्तै सन् १९९९ मा ११ शतक बने भने सन २००३ मा २१ शतक बनेका थिए । त्यस्तै सन् २००७ मा २० शतक बने भने सन् २०११ मा २४ शतक बनेका थिए । त्यस्तै सन् २०१५ मा अहिलेसम्म कै धेरै ३८ शतक बनेका थिए ।
त्यस्तै विश्वकपमा एक पारीमा धेरै रन बनाउने खेलाडी न्यूजिल्यान्डका मार्टिन गप्टिल हुन् । गप्टिलले सन् २०१५ विश्वकपमा वेस्टइन्डिजविरुद्ध २३७ रन बनाएका थिए । त्यस्तै विश्वकपमा एक पारीमा धेरै रन बनाउने दोस्रो खेलाडी वेस्टइन्डिजका क्रिस गेल हुन् । गेलले सन् २०१५ विश्वकपमा जिम्बाबेविरुद्ध २१५ रन बनाएका थिए । त्यस्तै यस सुचिमा तेस्रो स्थानमा दक्षिण अफ्रिकाका गेरी क्रिष्टन रहेका छन् । गेरीले सन् १९९६ विश्वकपमा युएईविरुद्ध १८८ रन बनाएका थिए । त्यस्तै यस सुचिमा चौथो स्थानमा भारतका सौरभ गांगुली रहेका छन् । गांगुलीले सन् १९९९ विश्वकपमा श्रीलंकाविरुद्ध १८३ रन बनाएका थिए ।
विश्वकपमा मास्टर बलाष्टर सचिनका चार रेकर्ड :
विश्वकपमा अहिलेसम्म केहि यस्ता रेकर्ड बनेका छन् जुन छिट्टै टुट्ने संकेत देखिएको छैन । यस रिपोर्टमा भारतीय महान क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकरले विश्वकपमा बनाएका चार रेकर्डको बारेमा चर्चा गर्दै छौ ।
i) विश्वकपमा धेरै रन :
विश्वकपमा ६ पटक खेलेका सचिनको नाममा अहिलेसम्म धेरै रन बनाउने रेकर्ड कायम रहेको छ । सचिनले विश्वकपमा २२७८ रन बनाएका छन् । ५६.९५ को औसतले सचिनले ४५ खेलमा सो रन बनाएका हुन् । सचिनले विश्वकपमा सन् २००३ मा नामिबियाविरुद्ध १५२ सर्वाधिक रन बनाएका थिए । यस रेकर्डको नजिक अहिले कुनै खेलाडी देखिएको छैन ।
II) विश्वकपमा धेरै शतक:
सचिनको नाममा विश्वकपमा सबै भन्दा धेरै शतक बनाउने रेकर्ड समेत रहेको छ । सचिनले विश्वकपमा ६ शतक बनाएका छन् । सचिनले १९९२, १९९६, १९९९, २००३, २००७ र २०११ मा विश्वकप खेलेका थिए ।विश्वकपमा सचिनले पहिलो शतक सन् १९९६ मा केन्याको विरुद्ध बनाएका थिए । केन्याविरुद्ध १२७ रन अविजित बनाएका थिए । त्यस्तै दोस्रो शतक १९९६ को विश्वकपमै श्रीलंका विरुद्ध १३७ रन बनाएका थिए । त्यस्तै सचिनको विश्वकपमा तेस्रो शतक केन्या विरुद्ध १९९९ विश्वकपमा बनाएका थिए । त्यस्तै विश्वकपमा सचिनले दोस्रो शतक २००३ विश्वकपमा १५२ रन बनाएका थिए ।
त्यस्तै विश्वकपमा सचिनको पाँचौ शतक २०११ को विश्वकपमा इङल्याण्डविरुद्ध १२० रन बनाएका थिए । त्यस्तै विश्वकपमा सचिनले छैठौ शतक २०११ मा दक्षिण अफ्रीकाविरुद्ध बनाएका थिए ।
III) धेरै अर्धशतक:
विश्वकप क्रिकेटमा धेरै अर्धशतक बनाउने खेलाडी पनि भारतका सचिन तेन्दुलकर नै हुन् । सचिनले विश्वकपमा सबै भन्दा धेरै २१ अर्धशतक बनाएका छन् । सचिनले सन् २००३ को विश्वकपमा मात्र ६ अर्धशतक बनाएका थिए ।
iv) एक विश्वकपमा धेरै रन :
एक विश्वकपमा धेरै रन बनाउने रेकर्ड पनि सचिन तेन्दुलकरको नाममा रहेको छ । सचिनले सन् २००३ को विश्वकपमा खेलेका ११ खेलमा ६७३ रन बनाएका थिए । सचिनले यस विश्वकपमा एक शतक र ६ अर्धशतकसहित ६१.१८ को औसतले ६७३ रन बनाएका थिए ।
विश्वकपका १० रोचक तथ्य :
१. विश्वकपमा वेस्टइन्डिजका क्लाइड लायड र अस्ट्रेलियाका कप्तान रिक्की पोन्टिङले २-२ पटक विश्वकप जितेका छन् । लायडले सन् १९७५ र १९७९ मा वेस्टइन्डिजका लागि कप्तानी गर्दै विश्वकप जिताएका थिए । त्यस्तै रिक्की पोन्टिङले कप्तानक रुपमा सन् २००३ र २००७ मा विश्वकप जितेका थिए ।
२. भारतीय बलर चेतन शर्माको नाममा विश्वकपमा पहिलो ह्याट्रिक लिने बलरको रेकर्ड रहेको छ । शर्माले सन् १९८७ मा विश्वकपमा ह्याट्रिक लिएका छन् ।
३. नेदरल्याण्डका नोलान क्लार्कले सन् १९९६ मा ४७ बर्ष २५७ दिनको दिन विश्वकप खेल्दै बढी उमेरमा विश्वकप खेल्ने रेकर्ड बनाएका छन् ।
४. विश्वकपको इतिहासमा सबै भन्दा बढी ५ पटक विश्वकपको जितेको छ । अस्ट्रेलियाले सन् १९८७, १९९९, २००३, २००७ र २०१५ मा विश्वकप जितेको थियो ।
५. भारत एक मात्र विश्वकप जित्ने यस्तो देश हो जसले १९८३ मा ६० ओभरको विश्वकप जितेको थियो भने सन् २०११ मा ५० ओभरको विश्वकप जितेको थियो ।
६. विश्वकपमा सबै भन्दा बढी रन बनाउने रेकर्ड भारतीय महान ब्याट्सम्यान सचिन तेन्दुलकरको नाममा रहेको छ । सचिनले विश्वकपमा ४५ खेल खेल्दै २२७८ रन बनाएका छन् ।
७. विश्वकपमा एक पारीमा सर्वाधिक रन बनाउने रेकर्ड न्यूजील्याण्डका मार्टिन गप्टिलको नाममा रहेको छ । गप्टिलले सन् २०१५ विश्वकपमा वेस्टइन्डिजविरुद्ध २३७ रन बनाएका थिए ।
८. विश्वकपमा सबैभन्दा ठुलो साझेदारी गर्ने रेकर्ड वेस्टइन्डिजका क्रिस गेल र मार्लोन स्याम्युलको नाममा रहेको छ । गेल र स्याम्युलबीच २०१५ विश्वकपमा जिम्बाबेविरुद्ध दोस्रो विकेटका लागि ३७२ रन बनाएका थिए ।
९. विश्वकपमा अहिलेसम्म सर्वाधिक विकेट लिने रेकर्ड अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याग्राको नाममा रहेको छ । म्याग्राले ३९ खेल खेल्दै विश्वकपमा ७१ विकेट लिदै यो रेकर्ड आफ्नो नाममा कायम राखेका छन् ।
१०. विश्वकपमा विकेटकिपरको रुपमा अहिलेसम्म धेरै विकेट लिने या आउट गर्ने खेलाडी श्रीलंकाका कुमारा संगाकारा हुन् । संगाकाराले विश्वकपमा ३७ खेल खेल्दै ५४ आउट गरेका छन् । त्यस्तै विश्वकपमा धेरै क्याच लिने रेकर्ड भने अस्ट्रेलियाका रिक्की पोन्टिङको नाममा रहेको छ ।पोन्टिङले ४६ खेल खेल्दै विश्वकपमा कुल २८ क्याच लिएका छन्।
Previous articleनिर्माण व्यवसायीद्वारा सरकारी ठेक्का बहिष्कार गर्ने घोषणा
Next articleबारामा सरकारले छुटाएको घर सानो पाईलाले निर्माण गरिदिने